IVEKI YOKUPHILA KOBOMI BEVEKI YE-12-07-20: UKUPHUMA KWIRAILS - IINDABA
Iveki yokuPhila koBomi beVeki ye-12-07-20: Ukuphuma kwiRails
Uyiphatha ngesandla kwiAva.
Unokuba yinto engasebenzi ngokupheleleyo, inqaku elinye, nangona kunjalo ufumana iintlobo ezintle.
Kwaye ngoku ukuba uzityhilile kuJohnsons, akukho ngaphantsi kwinqanaba lokubuya kwakhe okutsha,
I-Ava indibetha njengencwadi ehlekisayo ye-e-book villain, mhlawumbi imodeli yeSalem yeBatman's Catwoman.
Ubonakala enesakhono sokwenza okanye ukufumana nantoni na ayifunayo, uza kubulawa ngokoqobo, kwaye ayenze yonke lo gama egcina ukubukeka kwakhe okuthe tye, okufihlakeleyo kunye nokugcina kwakhona ii-liners ezilula.
Ukubuya kwakhona kulowo ungasekhoyo ebomini inene kunzima, uyaqonda. Akufani nokucoca ii-opera zesepha.
Amagqabantshintshi akhe okuhlekisa ngovuko lomelele ngakumbi kunokuba kubonakala ngathi yeyona nto ibalaseleyo kule veki. Kuyingozi kakhulu ukuba isiqingatha senqaku elinye lomsindo elichasayo likaKayla elicace gca kwaye liqikeleleke.
USteve noKayla benze iimpazamo ezininzi ngeAva ngeli xesha, kwaye ubukhulu becala, bekubonakala ngathi ziziphene ezenza ukuba i-supercouple elungileyo, enamaxesha akufuneki yenziwe.
Okokuqala, ukhetho lukaSteve lokuba uAva kufuneka ahlale nabo ukuze amlawule wenza ukuba angabinangqondo nangayiphi na indlela. Ngaba akayinkampani yobuqu? Kwenzeka ntoni kubantu abathandabuzekayo?
Eyona njongo yokuba abe sekhaya xa uKayla wayehlala apha yayiyidrama eyenziweyo kaKayla esenza iinzame zokukrwitsha u-Ava ngelixa u-Ava evuyiswa kukuphila.
Isenzo sobundlobongela esingacaphukisayo nesingenangqondo senziwa mandundu yinto eqinisekisiweyo yokuba uJohn WAFUMANA ngaphandle ngebheyile ngokwenza into efanayo noJan Spears.
Yizani ababhali. Ngokuqinisekileyo uya kuba nakho ukuthatha esinye isisombululo ukubonisa ukuba abantu abathandani ngaphezu koko ngokubabeka iintende zabo ngeenxa zonke emqaleni!
Ngapha koko, uSteve noKayla kufanele ukuba baqonde kwasekuqaleni ukuba injongo kaAva yayikukubonisa uTripp ngokuchasene nabo, kanye njengoko wenzayo edlulileyo engcwabeni ngezi DVD ezenze ukuba uTripp ahambe amantongomane ahlasele uKayla emva kweAva yokugqibela Yiya e.
Ke into yokugqibela ekufuneka beyenzile yamnceda ukuba andise umsantsa. Bekungafuneki ukuba bakhankanye uTripp eshiya ukungena kwakhe, kwaye ukusukela oko, bebengayi kothuka ukuba bobabini bathethe kwincoko okanye bameme uTripp ukuba ahlale naye njengenye indlela.
Kodwa eyona nto yoyikekayo abayenzileyo yayikukunikezela kwiifowuni zika-Ava kwaye balahle iindleko ngokuchasene naye ukuze angacinezeli iindleko ezintsha ngokuchasene noJoey ngokuzama ukubulala.
UKayla: UJustin wayefuna u-Ava akuncede ekuphehlelweni. Eyona ndlela anokuyenza ngayo yile yokuba ndiziyeke iindleko zokuxhwila.
UJoey: Ke ngekhe angayi ejele? Akufanele ukuba wenze loo nto!
Ndiyagula kwaye ndixutywe ekuthiwa bomelele, abantu abalungileyo banikezela kumngcipheko ngamnye, nokuba kukuhlekisa kangakanani na.
Kwaye le yayisisidenge. UJoey sele esentolongweni, ke ukuba u-Ava wenze okuhle kwizisongelo zakhe, akukho nto inokumguqula. Into ekuphela kwayo enokuthi yahluke ngokupheleleyo ibikukuba umntu othile ubufumene ubulungisa ngokwenene.
Ngokunyanisekileyo, eyona nto ibinokwenzeka kukuba uKayla azilahle iindleko zokuxhwila… ukuze uSteve acinezele iindleko zokudlwengula ngenxa kaAva woyikisa ngokubulala uKayla ukuba akalalanga naye. Kodwa oko kunokufuna ukuthatha i-Ava yokungaziphathi kakuhle kunye nolwaphulo-mthetho lokudlwengula kakhulu, ke, hayi.
ungaze uphuze umntu kwindawo enje yekrisimesi
Endaweni yokuba, i-Ava ifunyenwe ngaphandle kwe-scot-free; I-DA efanayo ethe yabandakanyeka kwezobulungisa kangangokuba yayikulungele ukutshutshisa uLani noKristen ngamnye ngokugwinta uKristen uVictor wazilahla iindleko uKayla wesibini wathi akazukungqina. USteve noKayla baya kubutha uJoey ngokungathi zonke ezi ziindaba ezilungileyo.
UJoey, owayengenguye olona hlobo lukrelekrele ngaphambili kunokuba wayethunyelwe entolongweni, yayinguye yedwa owayeqonda ukuba oku kwakungachanekanga, nangona kunjalo wadutyulwa ngokukhawuleza njengeyona nto ibalulekileyo ekugodukeni kwakhe.
Kwaye inkcaso yakhe ilibaleke ngokukhawuleza xa, kwiintsuku nje ezimbalwa zoBomi baKhe ezona ziganeko zingathandekiyo ejele, uRafe waqinisekisa kangangoko ebhengeza ukuba uJoey wayesungulwe.
Ngesiqhelo, bekukho umba nexesha layo yonke le nto. Emva kokufumana iindleko ngokuchasene noAva zehlile, uJustin wabaleka waya kumhla wakhe ongaphumelelanga noBonnie ngelixa uSteve noKayla baya kuJoey… kodwa bekucingelwa ukuba wayekuloo nkundla ngexesha lonke lokufumana isigwebo sikaJoey.
UJustin kufanele ukuba abe nobuchwephesha ngakumbi kunokuba bendicinga, ukubanakho ukuba kwiindawo ezimbini ngokungqalileyo ngoluhlobo KANYE nokumamela emva kokuba iinkundla zivaliwe ngalo mhla!
Ngendimbonile ngokulingeneyo enkundleni ukuba bekufuneka ndithathe isigqibo ngesinye, nangona. Ezo zigcawu zikaBonnie ziye zahlekisa.
UJustin akufuneki axakeke zizinto ezingathandekiyo, u-Annie Potts Bonnie ngenxa yokuba ebonakala ngathi ufana neqabane lakhe elingasekhoyo, kwaye ukungaqondi kwabo ngokusebenzela uKayla ngokusemthethweni yayisesinye sezidenge kungekudala.
Vumela uBonnie ahambe noMnu Random. UJustin ufanelwe ngaphezulu.
Izinto ezahlukeneyo ezingaqhelekanga malunga nomxholo webali likaBonnie bubuhlobo obutsha bukaJennifer noBonnie.
Uhlobo lukaJennifer luye lwajijwa ngaphandle kwefomu okoko kwaqala le nto yobudenge kaJack / Kate, nangona kunjalo obu buhlobo noBonnie buthatha ikeyiki.
Izihlangu ezi-Goody-two-shoes UJennifer wayenazo ii-BFF ezingaqhelekanga kule minyaka idlulileyo (khumbula xa wayethanda uKristen?), Nangona kunjalo ebengasoloko emsebenzisela uBonnie kwixa elidlulileyo, kwaye yaphinda yabonakala ingumlinganiswa wakhe ukuba anxile kwaye ukudlala ngothando nabafana abangahleliyo kuba uBonnie ethe.
Yintoni yena, elishumi elinesithandathu kwakhona? Ima kancinci!
Kananjalo, isambuku esipheleleyo sikaJennifer / Jack / Chad / Abigail / Gwen singalula kakhulu ukusithatha ukuba bekungekho zintathu iintatheli zophando eziphakamileyo ezazingaboni ngendlela yobubhanxa bukaGwen.
Ukudweliswa kwazo zonke iindlela zokuphamba kukaGwen kucacile ukuba kuya kuthatha indawo isixa esigqithisileyo sendawo.
Akukho njongo ukuba bobathathu aba bantu kufanele ukuba bathethe ngokuzithemba kumntu ongamaziyo oye wazivolontiya ukuba anyamekele ulutsha luka-Abigail, ngakumbi xa ubudlelwane buka-Abigail noGwen buqala ngo-Abby ekrokrela ukuba uGwen unqwenela ukuba iChad kuye!
Uhlala exelela umntu omnye into enye kunye nokulandelayo, kwakhona, ke ukuba aba bantu banokuze baxoxe ubuncinci omnye komnye, iskimu sinokubethwa sivuleke kakhulu.
Ukanti u-Abigail ngandlela thile uyakwazi ukuhlala kude nokuthi ukumema uJake kuMbulelo yayingumbono kaGwen naxa engatsho njalo oko kubangela ukuba iChad imtyhole ngokunganyaniseki kuye! Ukongeza akazange athi uGwen wayefanele ukuba azise uChad ukuba u-Abby wayeye kuJen okanye ukuba yayiyingcinga kaGwen ukusela kunye nokufunda ileta ngexesha lobusuku besi sihlandlo.
UChad khange athethe nokuba uGwen ngulowo ubandakanyekayo ukuba uAbby angamkhohlisa, kwaye uJennifer noJack khange bakhawuleze batyhileke ngomsindo batyhile into enye uGwen abayalele yona eyayichasene ngqo noko wayekuyalele. eyahlukileyo.
Xa abalinganiswa ekuthiwa balungile bengazigcini iimfihlelo zikaGwen kunye nobuchule bakhe okanye ukumthembela ngaphandle kwenjongo nangayiphi na indlela, bayaxhuma kwizigqibo eziziziyatha ezikhuthazwa nguGwen.
I-Chad ngekhe icinge ukuba uJake ulele no-Abby ukuba uGwen akakhange abeke umxholo entlokweni yakhe, kwaye kwakungekho bungqina bokuba. Ngokufanayo, uJennifer akananjongo yokucinga ukuba uJack uyaqhubeka nokulandela uGwen ngaphandle kukhetho lukaGwen.
Ngokukrakra, kutheni kungekho namnye kwaba bantu ukuba anqume ukuba ayenziwa, ngakumbi xa malunga nesi-9 sezigidi zexesha umntu azama ukubetha ubomi buka-Abigail?
Ngokwesiqhelo, uGabi ulunge ngakumbi kunale, naxa enomsindo kakhulu. Kodwa u-Abby kunye neChad kufuneka bazilungele ezi shenanigans, kanye njengoMarlena noJohn kufuneka bakulungele ukuqweqwedisa benze iinzame. Sheesh.
Ewe kunjalo, ezinye zezinto ezongezelelekileyo kuKate ngenxa yokuba enyanzelekile ukuba athandane ngokufihlakeleyo noJake ukuba akukho mntu uya kuze afunde malunga nemizuzu emva kokuba umcimbi wakhe oyimfihlo noJake uphume ngendlela engabonakaliyo kwaye wabangela itoni yokukhathazeka.
Akukho njongo yokuba olu lwalamano lube yimfihlo. UChad akavumanga unxibelelwano oluninzi lukaKate ngaphambili, kwaye uJake yindoda enkulu kunoClyde, awayethandana naye kakhulu.
Inqanaba kuphela lokuyigcina iyimfihlo kukunceda ukugcina umbono ombi kaChad wokuba u-Abby ngulo ulele noJake.
Kwaye kutheni eMhlabeni uJennifer ecinga ukuba uJake akufuneki abe ngumkhangeli kuKate xa ehlala kwindlu enkulu efana noJack, Chad, noHarold? Kuphantse kufane nokuba uJennifer ngenjongo yokutsala eli bali.
Okwangoku, ukuwa kuka-Allie ukuzama ukudubula iTripp kuyasebenza.
Andizukucinga ukuba umbono wentlalo-ntle uhamba kakuhle ukuba bekusele kufunyenwe ukuba u-Allie ulwa ngokwenyani ngokuthobekileyo kunokudlwengulwa kwakhe engenanto kodwa ke iyintsika yazo zonke iintlobo zobubhanxa obunobundlobongela.
Kodwa nantsi into endiyenzayo. Ndicinga ukuba imikhwa eyingozi ka-Allie iyagxothwa phantse ngumntu wonke edolophini eqondakalayo ngenxa yokuba engakhange alandele ubulungisa enkundleni yamatyala.
Iintsuku zoBomi bethu zithanda ukubhengeza le nto ukuba yamkelekile - ngakumbi amantombazana - ukuba abhuqe nje xa bengonelisekanga kwaye bekhubekile kwaye betyhwatyhashe ngogonyamelo.
Kubomi bokwenyani, kukho iimeko apho abantu bazifumanisa uvalelwe khona malunga nokuzikhusela: ukuthatha imifanekiso yomqweqwedisi okanye umyeni oxhaphazayo owayebenzakalisa ngelo xesha. Ingxelo enjalo inokubangela umdla kwiiNtsuku zoBomi bethu ukuba zilungelelanise nangona kubonakala ngathi kudlule ngokupheleleyo kubabhali.
Endaweni yoko, IINTSUKU zihlala ziqinisa iingcinga ezingamantombazana ngokungaxakeki, ukuzingca, kunye nobundlobongela, ekhuthaza ngaxeshanye umbono wabantu abanesifo sengqondo esinogonyamelo nesoyikisayo.
Ngokuqinisekileyo, abantu abanjengoRafe okanye uNicole bathi ubundlobongela akufuneki bube yimpendulo, nangona kunjalo bayamkhusela umenzi wobundlobongela ngokuchasene nabo bonke bazama ukubekwa ityala ngemikhwa yakhe, beyithethelela ngenxa yesiganeko esinoxanduva. babenexesha elinzima.
Le yinkulungwane yamashumi amabini ananye. Iintsuku zoBomi bethu zinako kwaye kufuneka zenze ngaphezulu.
Kuyamangalisa ukuba uGwen uhlola uKate ngalo lonke ixesha, ngaphandle kwaxa uKate efuna ukuthetha noAllie.
Kufana noKate kumabali amabini ahluke ngokupheleleyo angafanelekanga ukuba ahlangane, ke eyokuqala ngomlingo iyayeka ukubakho xa ebandakanyeka kwesesibini.
Kananjalo, ngaba ukho omnye umntu ongonelisekanga kukuba u-Abe ukhethe uRafe njengoKhomishina omtsha?
Njengokuba ecaphukisa uLani, kusenokwenzeka ukuba yenze nengqondo engaphaya ukuba u-Abe atyumbe u-Eli ngaphandle kokuwa kukaLani kunye nomyeni wakhe.
Oko ngekwakwenza ukuba intloko kaLani idubule kwaye inike u-Abe ithuba lokubeka intombi yakhe enxaxhileyo endaweni yakhe ngokukhawuleza nakubo bonke. Ayikuko ukuba uyayenza loo nto.
Kwaye ngaphezu koko, uEli kuphela kopolisa olandela izikhokelo njengenye indlela yokuzama indlela eyahlukileyo ngalo lonke ixesha. Kum, ezo zinto zingumkhomishinala ongezelelweyo kunoRafe kunye nokulungiswa kwakhe kufuneka enze inkomo kuGabi.
Okokugqibela, ubunzima bokuhlola uFilipu uSarah noXander abachaphazelekayo kufuneka buhambile.
Ngaba ukhona umntu ongakhange abone ukuzama kukaFilipu ukumanga uSarah evela kumayile enye? Ngaba ukho umntu othandabuzayo ukuba ukuxhathisa kukaSarah kuyakhawuleza ukuthamba, kwaye yena noFilipu baya kuwela omnye komnye okwenyani… kanti yena uwela uKloe kwakhona?
Ngelixa uFilipu / uChloe ekhumbula ukuba yayisisipho esimnandi kubalandeli bakaPhloe, ukuba uFilipu abhabhe kwilangatye lesikolo esiphakamileyo aye kwinto eyahlukileyo ngoku ukuba uneminyaka eliphakathi akayithandani. Kuyabandezeleka kwaye kumenza abonakale njengendoda endala engazange nangayiphi na indlela ifumane ngaphezulu kwako nakuphi na ukuphoxeka kwakhe kolutsha.
Kodwa uFilipu / uSarah akangcono kakhulu.
Ukufumana umvuzo kwi-brandel chamblee
Ubuninzi bobuqhetseba kunye nokuwela kabini okwenzekayo kwenza ababukeli babe nesiyezi, konke kukwandiswa kolu khuphiswano lobuchwephesha kunye nokugquma kakhulu phakathi kukaPhilip noXander, kwaye uSarah akufuneki abe ngumntu othandekayo okanye owonelisayo nangaphandle kobubhanxa.
Ngoku sinoCharlie kwindibaniselwano, sinyanzelwe yindoda nganye ukuba ihlole izinto ezahlukeneyo, kwaye uSarah wenza imiba ebubudenge njengokufowunela uXander kwiphaseji engaphandle indawo ehleliyo uPhilip kwaye uhlala esiya kwigumbi lokulala likaXander ngelixa bonakele phezulu.
Kwasa. Umntu othile undivusa xa liphelile eli bali lihlekisayo.
Iflip yakho, iiNtsuku zoBomi Bethu zibaxekileyo.
Ngaba ucinga ukuba ndinobunzima kakhulu kumgca webali likaFilipu? Vumelana ngeAva? Ngaba unemibono ngeendlela ezahlukeneyo zeentsuku zokuPhila kwethu kuyo yonke iveki ye-12-11-20?
Hit thebig, luhlaza BONISA IZIMVO iqhosha kwaye usixelele izimvo zakho!
Ulambele iiNtsuku ezongezelelekileyo zoBomi Bethu? Jonga kwakhona ngeCawe ngeentsuku zethu zoBomi boBomi kwincoko yababini.
Iintsuku zoBomi bethu ziyaqhubeka ukubonakala kwi-NBC ngeentsuku zaphakathi evekini. Jonga uluhlu lwakho lwendalo lwamaxesha omoya.
UJack Ori Ungumbhali wabasebenzi abaphezulu beTV yeFanatic. Inqaku lakhe lokuqala lokukhula kwabantu abancinci, Ukuphinda enze uHana Ithengiswa eAmazon. Mlandele phambili Twitter .
Izigaba: Iindaba Umqala Iwiki
inyamalale ngokusekwe kwibali eliyinyani
josh dun umhla wokuzalwa
tyra iibhanki kunye nomyeni
Iiyure zePasika eziqhelekileyo